Inona no atao hoe sivana HEPA?
HEPA dia fanafohezana ny High Efficiency Particulate Air, ka ny HEPA sivana dia High Efficiency Particulate Air sivana. Ny sivana HEPA H14 dia tsy maintsy maka ny 99.995 isan-jaton'ny 0.3 microns particles na ny kely kokoa aza, araka ny filazan'ny Institute of Environmental Science and Technology.
Lasitra: 3-12 μm
Bakteria: 0.3 hatramin'ny 60μm
Etona amin'ny fiara: 1-150μm
Oksizenina madio: 0.0005μm
Ahoana no fiasan'ny sivana HEPA?
Raha fintinina, ny sivana HEPA dia mamandrika ny loton'ny rivotra ao anaty tranonkala fibre. Miankina amin'ny haben'ny poti-javatra, mety hitranga amin'ny fomba efatra samihafa izany: fifandonana inertial, diffusion, interception na screening.
Ny loto lehibe kokoa dia voafandrika amin'ny fiantraika inertial sy ny fitiliana. Mifandona amin'ny fibre ireo poti-javatra ka tratra, na tratra miezaka mandalo amin'ny fibre. Rehefa mandalo amin'ny sivana ireo poti antonony dia voafandriky ny fibre. Mipoitra ireo potikely kely kokoa rehefa mandalo ny sivana, ary amin'ny farany dia mifandona amin'ny fibra ary voafandrika.
Ho an'ny vanim-potoana COVID-19 ihany ve ny mpanadio rivotra?
Ho fanampin'ny fanampiana lehibe amin'ny fiatrehana ny COVID-19, ny mpanadio rivotra dia afaka manohy manatsara ny kalitaon'ny rivotra aorian'ny fihanaky ny COVID-19, mampihena be ny fihanaky ny sery any an-tsekoly na any amin'ny birao. Izy io koa dia manasivana ny allergène amin'ny rivotra ary misoroka ny olana allergy mandritra ny vanim-potoanan'ny vovobony. Ny mpanadio rivotra miaraka amin'ny fiasan'ny humidifying dia afaka mandrindra sy mifehy ny hamandoana, miaro ny trakta taovam-pisefoana, ary misoroka ny aretina taovam-pisefoana vokatry ny rivotra maina.
Inona no atao hoe nanocrystals?
Ny nanocrystals dia sepiolite, attapulgite ary diatomite (fotaka diatom), izay mineraly tsy metaly tsy fahita firy eo amin'ny natiora ary manankarena mineraly adsorbent. Taorian'ny fanamafisana ara-drariny an'ireo mineraly ireo, ny nanocrystals dia miforona ho toy ny vokatra mpanadio rivotra. Anisan'izany, ny nano-lattice ny sepiolite sy attapulgite dia afaka mandray formaldehyde, benzene, amoniaka sy ny poizina sy mampidi-doza nano-level kely molekiola polar akora eny amin'ny rivotra, raha ny diatomite dia tsy afaka mandray micron-level macromolecular rivotra loto, fa koa manome. fantsona adsorption ho an'ny kristaly nano-mineraly hanatsarana ny fiantraikan'ny adsorption amin'ny kristaly nano-mineraly. Ny mpanadio rivotra kristaly mineraly nanometer dia manana endri-javatra telo lehibe: haingana adsorption hafainganam-pandeha, azo averina, ary sivana molekiola polar.
Inona no atao hoe disinfection amin'ny milina famonoana bibikely finday?
Ny mpiasa dia mametraka ny milina famonoana otrikaretina ao amin'ny faritra hodiovina, ary manomboka ny dingan'ny famonoana otrikaretina aorian'ny fanakatonana ny varavarana, ny varavarankely, ny rivotra ary ny rafitra rivotra madio. Mandeha ho azy ny robot ary manindrona otrikaretina amin'ny endrika zavona maina micron. Rehefa vita ny dingana famonoana otrikaretina araka ny lalana napetraka sy ny raikipohy famonoana otrikaretina, ny rivotra maina dia hanohy ny disinfection ny rivotra mandritra ny 30 ka hatramin'ny 60 minitra. Rehefa vita ny famonoana otrikaretina dia sokafy ny varavarana sy ny varavarankely ho an'ny rivotra voajanahary mandritra ny 30 minitra, ary avy eo dia fantaro ny tahan'ny fihanaky ny peroxyde hydrogène eny amin'ny rivotra. Rehefa ambany noho ny 1ppm ny hakitroky ny peroxyde hydrogène dia afaka miditra ny olona, ​​ary vita ny famonoana otrikaretina.
Inona no karazana famonoana otrikaretina tokony hampiasaina amin'ny milina fanamainana zavona maina?
Ny fitaovana dia mampiasa peroxyde hydrogène atomika ho famonoana otrikaretina. Ny vahaolana hidrôzenina peroxyde miaraka amin'ny fifantohana amin'ny 7.5% (W / W) dia ampidirina ao anaty milina toy ny rano. Amin'ny alàlan'ny atomization, ny peroxyde hydrogène dia tsy mitsahatra miparitaka any amin'ny toerana mihidy mba hanesorana ny proteinina mikraoba sy ny fototarazo eny amin'ny rivotra sy eny ambonin'ny zavatra, ka mitarika ho amin'ny fahafatesan'ny zavamiaina bitika, ary vokatr'izany, hahatratra ny tanjon'ny famonoana.
Inona avy ireo karazana holatra mety ho voadiosin'ny milina?
Ny Staphylococcus albicans, bakteria voajanahary voajanahary, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis ary karazana mainty hafa dia nokarohina sy novonoina.
Hatraiza ny halaviran'izy io?
Ny savaivony mivantana amin'ny atomizing intelligent disinfection robot dia mihoatra ny 5 metatra, ary ny savaivony tsindrona amin'ny milina famonoana bibikely dia mihoatra ny 3 metatra. Ny efitrano hodiovina dia azo rakofana haingana amin'ny hetsika Brown.
Ahoana ny fomba fiasanao ny milina?
Ny milina famonoana otrikaretina manan-tsaina dia azo fehezina amin'ny takelaka iray, manomboka amin'ny lakile iray, ny angon-drakitra fampiasana amin'ny antsipiriany sy marina mandritra ny dingan'ny famonoana. Ny dingan'ny famonoana otrikaretina dia azo alaina amin'ny statistika ary azo soratana/tehirizina.
Ohatrinona ny toerana azo osiana otrikaretina amin'ny fiampangana?
Ny robot hidrôzenina peroxyde intelligent disinfection robot dia afaka mamono ny habaka ambony indrindra amin'ny 1500m³ amin'ny fiampangana tokana, ny milina famonoana otrikaretina portable dia afaka mamono ny habaka ambony indrindra amin'ny 100m³, ny milina famonoana entona entona dia afaka mamono ny habaka ambony indrindra amin'ny 300m³, ary ny milina famonoana ny taratra ultraviolet dia afaka mamono ny habaka ambony indrindra 350m³.
Afaka misoroka ny sakana ve ny robot desinfection?
Eny. Ny robot desinfection ataonay dia afaka manatratra ny fitetezam-tena sy ny famonoan-tena mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fampiasana sensor fiarovana amin'ny sakana maro, toy ny laser, ultrasonic, fakan-tsary lalina, sns. Ny fametrahana ny toerana marina sy ny fisorohana ny sakana mahay dia azo tanterahina.
Hafiriana ny fiantohana?
Misy antoka iray taona ho an'ny milina iray manontolo, manisa ny datin'ny fivarotana (tokony omena ny faktiora). Raha toa ka ao anatin'ny fe-potoana fiantohana ny milina famonoana bibikely. Ny lesoka ateraky ny vokatra mihitsy dia azo amboarina maimaim-poana.
Nahoana isika no misafidy sivana nanocrystal?